Xaafadda Islii oo looga dhawaaqay Dallad ay ku mideysanyihiin Soomaalida degan Xaafadaasi | Radio Muqdisho
Xaafadda Islii oo looga dhawaaqay Dallad ay ku mideysanyihiin Soomaalida degan Xaafadaasi
Published on January 14, 2013 by Mowliid · 1 Comment · 1,747 views
Bulshada kala duwan ee ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada Nairobi ayaa gelinkii dambe ee shalay ku dhawaaqay iney sameysteen Dallad ay ku mideysanyihiin ayadoo taasina ay uga gol leeyihiin iney cod mideysan kula hadlaan Dowladda Kenya.
Dalladan oo ay ku mideysanyihiin dhamaan dadka Soomaaliyeed ee dagan xaafadda Islii ayaa si rasmi ah looga dhawaaqay xaafaddaasi, waxaana la sheegay in Dalladani ay meteleyso dhamaan qeybaha bulshada ku nool xaafadda Islii.
Guddoomiyaha Dallada Xuseen Maxamed Aar ayaa Radio Muqdisho u sheegay in Dalladan ku dhawaaqidda Dalladan ay ka dambeeysay kadib markii dowlada Kenya ay ku boorisay guddiga ganacsatada in ay dhistaan Dallan ay ku mideysanyihiin dhamaan Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii.si dowladda Kenya ugu fidudaato in ay xiriir toos ah la soo sameeyaan bulshada Soomaalida.
Sidoo kale guddoomiyaha Dalladan ayaa sheegay in Dalladan ay aqoonsantahay Dowladda Kenya, islamarkaana 21-ka bishan ay kulankoodii ugu horeeyay la yeelandoonto dowlada hoose ee Nairobi.
Dalladan ayuu tilmaamayy guddoomiyuhu in ay wax ka qabandoonto dhibaatada soo Wajahda dadka deegaan ahaan wada dega xaafada Islii , waana markii ugu horeysay ee Dallad noocaan ah oo ay ku mideysanyihiin bulshada Soomalaida looga dhawaaqo Xaafada Islii ee magaalada Nairobi.
Sid ahmed osman says:	January 15, 2013 at 12:40 am	Runtii, mar hore ayaa loo baahnaa ,in daladaan ay sameytaan bulshada somaaliyed ee ku nool deegaanka ,isli ee nairobi, si looga hortago dhibaatooyinka loo geysto bulshada somaaliyed ee ku nool deegaanka isli.
Waa ilaah mahadii,a in hada somalidu ay ku baraarugti in ay sameystaan dalad ay ku mideysanyihin oo ilaalisa danahooda,waxna ka bedesha hab noledkooda.